Uyini Umehluko Phakathi Kwebhiya Kakolweni neBhali Lobhali-Izindaba-NingBo COFF Machinery Co., ltd
Uyini Umehluko Phakathi Kwebhiya Yokolweni neBhiya
Isikhathi: 2020-06-15 Amazwana: 59
Ngubhiya kakolweni ophekiwe omncane (ubhiya kakolweni wonke ubhiya onenhlanganisela eluhlaza engaba ngu-11 kuye ku-13 ° P). Ngokuvamile okuqukethwe kotshwala kungu-4.8-5.0% vol. Ukunambitheka ngokuvamile kusinda, njengekhofi elibabayo i-malt ishisiwe, i-mellow eqinile.
Ungubhiya omnyama kakolweni, ungabizwa nangokuthi ubhiya omhlophe (uhlobo lukabhiya oluphaphathekile, kanti ukolweni omhlophe uyigolide futhi ukuqina kukakolweni kunsundu), ngaleyo ndlela kugqamisa ukuhlukahluka kukabhiya kakolweni.Ubhiya oshisayo ubilisiwe engqimbeni ephezulu, futhi ukuhlushwa kwayo kwasekuqaleni kwakuphakathi kuka-11 no-14. Utshwala bayo bungu-5.0-6.0% vol (imvubelo ingenziwa ngaphakathi kwebhodlela, ukulungisa imvubelo kungabonakala ezansi kwebhodlela, ngombala onamafu). uhlobo lobhiya lunephunga elisha (elinephunga lemvelo nelilula likakolweni, uhobhane, kanye nokugcoba okufana noshokoledi ngaphakathi kwesikhwebu sikakolo), kwesinye isikhathi kuhambisana nephunga elibucayi.
Uma kukhulunywa ngokunambitha, ubhiya webhali kufanele ube kuhle ukuphuza. Ibhali linomphumela wegesi ezuzisayo, ukudla okubanzi nokuncibilika. Kungasiza ukugaya, ukuzola kwesisu nokuqeda ukoma, nokuqeda ukushisa.
Kepha uma kukhulunywa ngokudla okunempilo, ubhiya kakolweni unomsoco kakhulu. Ukolweni ucebile ngesitashi, amaprotheni amaningi, amafutha amancane, amaminerali ahlukahlukene kanye namavithamini e-B. Ubhiya we-Wheat ushibhile futhi awunambitheki kancane!
Previous: I-Red Ale (ibhali)
Okulandelayo: AMACEBISO OKUPHATHWA KWEZIMPAWU ZOKUSEBENZA